जनताको खुशी फिर्ता गरिदिनुहोस | सिमान्तMarginal जनताको खुशी फिर्ता गरिदिनुहोस – सिमान्तMarginal
जनताको खुशी फिर्ता गरिदिनुहोस
Posted on 13 Jan 2015 by Jesi | INCOMESCO
परिस्थितिले यी नेताहरूको काँधमा मुलुक र देशवासीको भाग्य सुम्पियो । अन्तिम परिक्षणको अवस्था छ की नेपालीले संविधान पाउने कि नपाउने भनेर ! डर त नेपाल के हुनेसम्म पुगिसकेकोछ। यो डर सिर्जना गर्ने तपाइँहरुनै हो ।
तर भन्नै पर्छ तपाइं नेताको नेत्रित्व स्विकार्न नसकेर माओवादी पाँचवटा टुक्रामा टुक्रिए । राजनितिक शक्तिहरु यसरी शक्ति क्षयिकरण हुनु कसैका लागि पनि राम्रो होईन । हिजोका आफ्नै मित्रहरुलाई त मनाउन सकिएको छैन् भने आनि के का लागि बुझ पचाइएको हो, भोलिको ‘तन्त्र’ मा एकता हुन्छ भनेर! जातको नारा हिजो उचालेर आज टोक्नु न बोक्ने भएको छ ।
पैतालाको एक मुठी माटो सुँघेर देश र जनताको लागि एउटा असल निर्णय गरि दिनुहोस! समय अव धेरै कुर्न नसक्ने अवस्थामा थकित छ, जनता हैरान छन, देश लमतन्न निर्जिव भएको छ ! बिदेशिले तपाईंको आँगनमा भतेरको चुलो सल्काउदैछन ! जफत गरिएको जनताको खुशी फिर्ता गरिदिनुहोस ।
अहिले संविधान आउनु भनेको सबै कुराहरू सेलाएर जाने छन आनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको राजनीति त गर्न पाई हालिन्छ नी ! प्रजातन्त्रमा राम्रो गर्ने कोहि कसैको पनि अस्तित्व सकिदैन। संधै जनताको लागि भन्नुहुन्छ ! आज सात बर्षभयो, कति ठुलो क्षति भैसक्यो!!! जनता ले के पाए ?! दु:ख र हैरानी बाहेक । सक्नु हुन्न भने बरु छाडि दिनुहोस बाँकी दोषको भगिदार हुनु पर्ने छैन ।
पैतालाको एक मुठी माटो सुँघेर देश र जनताको लागि एउटा असल निर्णय गरि दिनुहोस, तपाइहरू त्यसै माहान हुनुहुनेछ ! समय अव धेरै कुर्न नसक्ने अवस्थामा थकित छ, जनता हैरान छन, देश लमतन्न निर्जिव भएको छ ! बिदेशिले तपाईंको आँगनमा भतेरको चुलो सल्काउदैछन ! जफत गरिएको जनताको खुशी फिर्ता गरिदिनुहोस ।
Posted in संबिधानTagged नेपाल, संबिधानLeaveacomment
Previous Postविकल्प खोजिनु पर्छ, त्यो २०४७ को संबिधान हुन सक्छNext Postमोदीको तारिफ गर्न सडकमा ओर्लेको नेपाली जनता आफ्नै नेतालाई सराप्न किन वाध्य छ !